Shirkii Wadatashiga Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha oo war laga soo saaray | HalQaran.com
Home Warar Cusub Shirkii Wadatashiga Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha oo war laga soo saaray
Muqdisho (Halqaran.com) – Shirka Wadatashiga ee Sabtidii maanta Caasimadda Muqdisho uga furmay Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii koowaad soo xirmay, warbaahintana la siiyay warbixin kooban oo aadan shirka.
Shirkan oo Saddex maalin socon doona ayaa waxaa ka mid ah qodobada looga hadlay sidii loo heli lahaa guddi dhexdhexaad ah, maadaama guddiga hadda jira lagu eedeeyay in ay yihiin taageerayaasha Madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha NISA.
“Waan isu nimid, culees jiro dartii Ayaan isugu nimid, waan arinsanay, waa is cafinay, waan go’aan sannay arinkaan inaan wax ka qabano, waan awoodnaa inaan wax ka qabano, shirkaan intuu socdo markaata briefing ayaan idin siin doonnaa, tashiyo ayaan wadnaa waajibaad ayaan kala qaadanay xaaladuhu wey soconayaan baaqeenu waa nabad”, ayuu yiri Musharrax Daahir Geelle.
Ugu dambeyn, Musharrax Daahir Geelle ayaa sheegay in aanan mar dambe la aqbali doonin Guddi ay ku jiraan Nabadsugida.
Shirka Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha
DF Soomaaliya oo guddi u xil saartay Abaaraha ka jira dalka